Ma jiro wax khasaare ah: Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay Giriigga, Qubrus iyo Turkiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Giriigga » Ma jiro wax khasaare ah: Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay Giriigga, Qubrus iyo Turkiga
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Qubrus • Wararka Masar • Wararka Giriigga • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga
Ma jiro wax khasaare ah: Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay Giriigga, Qubrus iyo Turkiga.
Laba dhulgariir oo xoog badan ayaa ku dhuftay Crete toddobaadyadii la soo dhaafay, oo dilay hal qof iyo burbur dhismayaal. Khabiir ku xeel dheer arrimaha dhulka Giriigga ayaa sheegay in dhulgariirka Talaadadii uu ka yimid qalad Afrikaan oo kale oo aan la fileyn in wax gariir ah uu dhaco.
Cabirka dhulgariirka ayaa lagu qiyaasay 6 iyo qoto dheer 37.8km (23.5 mayl) oo ay samaysay sahanka dhulka ee Maraykanka.
Hay'adda xakamaynta masiibooyinka ee Turkiga, Afad, ayaa sheegtay in dhulgariirku uu ka dhacay meel 155km u jirta xeebta Turkiga.
Dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 6 ayaa ku dhuftay meel 155km (96 mayl) u jirta magaalada loo dalxiis tago ee Kas, ee gobolka Antalya.
Dhulgariir xooggan oo cabbirkiisu yahay 6 ayaa caawa ku dhuftay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Bariga Mediterranean -ka.
Dhulgariirka ayaa ku dhuftay dhowr jasiiradood oo ku yaalla Giriigga iyo gobollo kale oo ku yaalla bariga Mediterranean -ka, oo ay ku jiraan koonfurta Antalya ee Turkiga iyo sidoo kale magaalooyinka Masar.
Gariirka ayaa laga dareemay jasiiradaha Karpathos, Crete, Santorini iyo Rhodes ee Giriiga Isniintii.
Dhulgariirku wuxuu kaloo ruxay caasimadda Qubrus ee Nicosia, Beirut ee Lubnaan, Qaahira iyo magaalooyin kale oo Masar ah, qaybo ka mid ah Israa’iil iyo dhulka Falastiin, iyo gobolka ku xeeran koonfurta Antalya ee Turkiga.
Afad wuxuu sheegay in dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 6 uu ku dhacay meel 155km (96 mayl) u jirta magaalada loo dalxiis tago ee Kas, ee gobolka Antalya.
Guddoomiyaha degmada Kas, Saban Arda Yazici, ayaa sheegay in mas'uuliyiintu aysan soo gaarin wax warbixin ah oo ku saabsan waxyeello ama dhaawac Kas iyo nawaaxigeeda.
Toddobaadkii hore, dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 oo u dhowaa Crete ayaa dadka ka naxay. Waxaa laga dareemay meel ka fog caasimadda Giriigga, Athens, oo qiyaastii 400km (249 mayl) u jirta.
Saddex toddobaad ka hor, sidaan oo kale dhulgariir xooggan oo ku dhuftay Crete ayaa dilay hal qof.
Dhanka kale, Turkigu wuxuu dul fadhiyaa khadadka waaweyn ee ciladaha iyo dhulgariirrada ayaa ah kuwo soo noqnoqda. Ugu yaraan 17,000 oo qof ayaa ku dhimatay dhulgariir xooggan oo ka dhacay waqooyi -galbeed Turkiga sannadkii 1999 -kii.